Guam: Gara mudzimba kune zvese zvakajeka paTyphoon Mangkhut
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Guam: Gara mudzimba kune zvese zvakajeka paTyphoon Mangkhut
Kuputsa Kufamba Nhau • Zimbabwe Breaking News • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Parizvino, ndi4 mangwanani Chipiri mangwanani muU.S. Territory yeGuam. Vagari venzvimbo uye vashanyi vanonyanya kuchengetedzeka mumahotera, mudzimba, uye dzimba dzekugara sezvo dutu reMangkhut rakatiza kubva kuMariana richisiya nzira yemiti yakadonhedzwa, mitsara yemagetsi yakadonhedzwa uye marara akapararira.
Parizvino, ndi4 mangwanani Chipiri mangwanani muU.S. Territory yeGuam. Vagari venzvimbo uye vashanyi vanonyanya kuchengetedzeka mumahotera, mudzimba, uye dzimba dzekugara sezvo dutu reMangkhut rakatiza kubva kuMariana richisiya nzira yemiti yakadonhedzwa, mitsara yemagetsi yakadonhedzwa uye marara akapararira. Guam mugari nevashanyi vakayambirwa kugara mumba uye kumirira vakuru kuti vape zvese-zvakajeka.
Semusi weChipiri mangwanani dutu raifamba kubva kuzvitsuwa, asi mhepo ine simba, mvura uye makungwa ane njodzi akasara.
Zvinoenderana nenhepfenyuro dzemuno: Nepo mimwe migwagwa yaive yakajeka, muti muhombe wakavhara nzira dzekuchamhembe kweRoute 4 yakananga kuHagåtña. Pachikomo cheNimitz, miti yakadonhedzwa yakavharira mativi ese eRwendo 6. Zviratidzo zvemumugwagwa nemarambi emumugwagwa zvakange zvabuda.
Kunaya kukuru kwakatarisirwa kuenderera kwehusiku hwakawanda, sekureva kwaLandon Aydlett, nyanzvi yezvemamiriro ekunze neNational Weather Service kuGuam akadaro.
Kuongorora kwekukuvadza kuchaitwa nevemunharaunda nevakuru vehurumende neChipiri.